🏡 Guryaha | Booqo Hultsfred
Si fiican u seexo dabeecadda agteeda!
Ma waxaad rabtaa inaad ka toosto aqal yar oo kaynta dhexdeeda ah oo koronto la'aan ah ama daris la'aan ah, mise waxaad dooranaysaa inaad ku noolaato aqalo si aad u karisid qaxwadaada subaxdii, u ogolow caruurtu qol u gaar ah oo ay awoodaan. si aad u dhigato meel ka baxsan guntiga? Dhib malaha nooca aqal ee aad doorato, halkan wax ayaa kuu yaala. Guryaha nooc kasta ah.